DEG DEG: Dibad bax xoogan oo jowhar is qabsaday kadib markii askari ciidanka ka tirsan uu dilay…. | Kismaayo24 News Agency
DEG DEG: Dibad bax xoogan oo jowhar is qabsaday kadib markii askari ciidanka ka tirsan uu dilay….
Thursday May 11, 2017 - 11:54 under Somali News by Tifaftiraha K24
Askari ka tirsan ciidamada dowladda ayaa maanta wiil dhalinyaro ah wuxuu ku dilay magaalada jowhar ee xarunta KMG maamulka hirshabeelle.
Askariga oo ka tirsan ciidanka booliska ayaa toogasho ku dilay wiil dhalinyaro ah kadib markii muran uusoo kala dhexgalay.
Dilka wiilkaan dhalinyarada ah ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda horseed ee dagmada jowhar waxaana la sheegay in askariga uu xabad la dhacay wiilka dhalinyarada ah isla goobtana uu ku ruux baxay.
Askariga dilka geestay ayaa goobta ka cararay waxaana bilowday dibad bax balaaran oo lagaga soo horjeedo dilka wiilka dhalinyarada ah waxaana dadka banaanbaxayaasha ah ay wadeen meydka wiilka uu askariga dilay iyagoona ku qeylo dhaaminaayay in lasoo qabtay askariga dilka geystay.
Bannaabaxayaasha oo meydka wata ayaa dibad baxooda isugu soo uruuriyay saldhigga booliska waxaana meydka ay dhigeen banaanka hore ee saldhigga ciidanka iyagoona sheegay in aan la aasi doonin meydka ilaa laga soo qabto askariga dilka geystay.
Dadka banaanbaxayaasha waxaa la hadlay saraakiisha amniga waxaana loo sheegay in askariga dilka geystay gacanta lagu dhigay iyadoona dibad baxayaasha lagu amray in ay meydka asturaan.
Waxgaradka xaafadda horseed ayaa dadka isku soo baxay ka dalbaday in meydka ay asturaan una sheegay in gacanta lagu dhigay askariga dilka geestay cadaaladdana la horkeeni doono.
Ma ahan markii ugu horeysay oo askarta ciidanka dowladda ee ku sugan jowhar ay dad shacab ah dil u geystaan waxaana dhawaan jowhar askari ka tirsan ciidanka dowladda uu ku dilay wiil dhalinyaro ah isagoona dhaawacay gabar la dhalatay marxuumka uu askariga dilay mana jirto cid ilaa iyo hada cadaaladda horkeentay askariga dilka geestay.